ESI GBANYỤỌ PASWỌỌDỤ PASWỌỌDỤ ỌSỌ ỌSỌ WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
Gbanye paswọọdụ paswọọdụ netwọk na Windows 7
Ndị ọrụ nke Windows 7 nwere ike ịchọta nsogbu, nke bụ na usoro rịọrọ ịbanye paswọọdụ netwọk. Ọnọdụ a na-emekarị mgbe ị na-eme ka ndị na-ebi akwụkwọ na netwọk nweta ohere, ma ndị ọzọ nwere ike ime. Anyị ga-aghọta otu esi eme ihe n'ọnọdụ a.
Gbanye paswọọdụ paswọọdụ netwọk
Iji nweta onye nbipute na netwọk, ị ga-aga grid "Òtù Ọrụ" ma kesaa onye nbipute. Mgbe ejiri ya, usoro ahụ nwere ike ịmalite ịrịọ ka okwuntughe iji nweta igwe a, nke anaghị adị. Tụlee nsogbu a.
Gaa na menu "Malite" na imeghe "Ogwe njikwa".
Na windo meghere, setịpụ menu "Lee" pụtara "Nnukwu Oyiyi" (ị nwere ike ịtọ na "Ihe ngosi nta").
Gaa "Network and Sharing Center".
Gaa na sub "Gbanwee nhọrọ ịkekọrịta dị elu". Anyị ga-ahụ ọtụtụ profaịlụ netwọk: "Ụlọ ma ọ bụ ọrụ"Ma "General (profaịlụ ugbu a)". Anyị nwere mmasị na "General (profaịlụ ugbu a)", mepee ya ma chọọ ihe dị n'okpuru "Nwekọrịta nkekọrịta na paswọọdụ nchedo". Mee ka isi ihe dị iche "Gbanyụọ ikere òkè na paswọọdụ" wee pịa "Zọpụta mgbanwe".
Nke ahụ bụ na, ọ bụrụ na ị mezuru ihe ndị a dị mfe, ị ga-efunahụ mkpa ịbanye paswọọdụ netwọk. Mkpa ịbanye paswọọdụ a ka ndị mmepe nke Windows 7 mepụtara maka nchịkọta ọzọ nke nchedo usoro, ma mgbe ụfọdụ, ọ na-akpata mgbakasị na ọrụ.